-रमेस राज वास्तोला
लिजवन पोर्चुगल ।
केही वर्ष पहिला काठमान्डौमा एक २९/३० वर्षीय युवा संग भेट भो ।अति भद्र देखीने ऊनीसंग परिचय गर्न मन लाग्यो ।हाम्रो परिचय पछि ऊनले भने मेरो नाम जायस्वर शर्मा । फलानो मन्त्रालयमा सुव्वा पदमा कार्यरत छु । जव ऊनले परिचय दिय मलाई ढुङ्गा खोज्दा देवता मिले झै भो । मैले कुरा काटे ।ओहो सुव्वासाप हुनु हुँदो रहेछ । मेरो सानो काम थियो त्यहाँ । मलाई सहयोग गर्नु पर्यो । वरु म केही सहयोग गरौला मैले भने ।
सुव्वासाप जायस्वरले भने सर यस्ता कुरा म संग नगर्नु होस् । म तपाईलाई सहयोग गर्ने छु । मलाई यो वापत केही चांहिदैन सर म त्यस्तो कर्मचारी होईन ।
भोली पल्ट सुव्वासापले मन्त्रालयमा बोलाएका दिन म सिहदरवार पुगे । ऊनले भेटमा भने तपाईको यो व्याक्तीगत काम होईन ।यो समाजको लागी काम हो, त्यसैले तपाईलाई सहयोग गर्दैछु । सधै भरि तपाईलाई लिन जान सक्दीन त्यसैले एउटा पास वनाईदीने छु । उनले त्यसो भनेपछि मलाइ झन सजिलो हुने भो । फोटो दिय ऊनले १५ दिन होईन ३ महीनाको लागी एउटा पास बनाइदिए ।
एक दिन सुव्वासाप संग गफगाफ गर्न मन लाग्यो ।मैले भने सुव्वासाप जाउं पोर्चुगल । ऊनले भने नाई म नजाने ।देश मै केही गर्ने हो ।अव अर्को वर्ष अधिकृत लड़्ने हो। नाम निकाल्छु । २ छोरी श्रीमती छन् ।ऊनीहरुलाई पढाउंछु । जेन तेन यही केही गर्दंछु, ऊनले भने । फेरी उनले थपे स्कुलमा पढ्दा एस एल सि फ़ेल हुने सवै अमेरीका गएका छन् ।अंग्रेजीमा ट्यालेव्ट हुने अस्ट्रेलीया गएका छन् । मेरो विषय मेजर नेपाली हो, यही विषमा एम ए गरे यता कानुनमा पनि एल एल वि गर्दैछु, मलाई यही राम्रो ।
केही दिनको वसाई पछी म विदेश तिर लागे । मैले केही उपहार दिदा पनि ऊनले लिन मानेनन् । ऊनले भने म तपाई संग कुनै कुराको अपेक्षा गरेर सहयोग गरेको होईन ।मलाई केही चाहिंदैन। ऊनले यसो भनिरहंदा मैले भने सुव्वासाप तपाई यदी घुमघामको लागी युरोप आउनु भयो भने जसरी नि पोर्चुगल आउनु होला मैले अनुरोध गरे । जायस्वर जि ले पनि हुन्छ भन्नु भयो ।हामी त्यहाँवाट विदा भयौ । म विदेश हिडे । सुरुका २/४ महीना हेलो हाई भयो पछि क्रमस पातलीयो ।
केही दिन अगाडी पोर्चुगलको राजधानी लिजवनको मार्टेमुनीज पार्कमा हिड्दै थिय ।होटल मुन्डेल अगाडी रुखको छाहारी मुनी एक जना नेपाली देखे । चिने जस्तै लाग्यो ।म अझ नजिकिदैं गएं । २ जना नै हेराहेर गर्यौ। मैले झ्याप भने सुव्वासाप । उनि अकमकिय अनि पछी उनले पनि चिने ।
लामो गफ भयो मैले सोधे कति भयो आयको सुव्वासाप ?
उनले भने म आयको ४५ दिन भयो ।मैले सोधे किन खवर नगर्नु भयको त मलाई ? ऊनले भने खै सर मैले संझेको त हुँ तर यहा आयर सवै जना संग संगत गर्दा थाहा भयो परदेशमा आफ्नो भन्ने कोही हुँदोरहेनछ । मैले प्रतीवाद गरे सुव्वासाप तपाईले भनेको त ठिक हो तर तपाईले मलाई गुन लगाउनु भयको छ नि हो, म त्यो गुन तिर्न भय पनि सहयोग गर्दछु । वरु भन्नु होस् म अधिकृत हुने विदेश जादै नजाने भनेर अड्डी कस्नु भयको थियो कसरी आऊनु भयो भन्नु होस् भन्दै मैले सोधे ।अव सुव्वासापले सवै भन्न थाले ।
हेर्नुहोस् पढाईमा म तगडा नै थिय। एस एस सि पनि राम्रो अंक लियर पास गरे। + २ र स्नातक सरासर पास गरे, लोकसेवामा लडेको सरकारी जागीर पनि सुरु गरे नासुवाट ।
मेरो श्रीमती २ छोरीहरु छन् ।तपाईले देखी हाल्नु भो ।जागीर काठमान्डौमा मेरो तलव २५ हजार थियो (अहीले ४७०० वढेर २९ हजार को हाराहारी छ ) जागीर सुव्वाको छ। मेरै तहका साथीहरु एअर्पोटमा छन् ।मन्त्रालयमा मन्त्रीको आसेंपासे छन्। जुन दलको मन्त्री आए रंग फेर्न जानीहाल्दछन् ।कमाई राम्रो छ। घर घडेरी जोड़का छन् तर म, न कुनै दल, न कुनै चाकडी, न कुनै युनीयन, म कतै पनि लागीन ।सरकारले दियको तलव वाहेक मैले कहिल्यै कहिवाट आर्थीक लाभ लिईन । २५ हजार तलवले मैले ७५ सय डेरा भाडा तिर्नु पर्दछ ।एक छोरी युरोकिड्समा छ ।अर्को एऊटा वोर्डीङ्गमा छिन्। २ छोरीको खर्च ८ हजार छ । वैनीको विहे गरियो ।आठ लाख ऋण छ ।महीनाको व्याज मात्र १२ हजार तिर्नु पर्दछ । खाना यताउता मसलन्द खर्च ६ हजार भन्दा माथी छ ।केही महीना अगाडी श्रीमतीको पथ्थरीको अपरेसन गर्दा ३० हजार लाग्यो ।गाउंघरवाट आउनेहरु पनि सरकारी जागिरे छ। प्रगति गरेको छ भन्दछन् । कहि सहयोग गर्दैन। छुचो भयो भन्दछन् ।उता दिदिवहिनीले ,दाईले भाऊजुको कुरा सुनेर हामीलाई सहयोग गरेन भन्दछन् । ऊता वुढीले गाउंलेको घोचपेच खाएर कति बाँच्ने । अनि अफिस गयो तोक आदेस आउंदछ । नेता उच्च पदस्थ कर्मचारीको फोन अनि तोक आउंदछ, नगरौ आफु अफटेरोमा परिने । गरौ कुनै न कुनै दिन अख़्तियारको फन्दामा परिने । मैले धेरै काम नेताको सोर्षफोर्षमा गरिन। मैले इमान्दारीतामा काम गरे ।इमान्दारीता काम गरे वापत म समाज परिवारमा माया होईन घृणाको पात्र वने किन कि म घुस खान्न तलवले मात्र सवैलाई खुसी पार्न सकिन ।
एक दिनको कुरा हो ,एउटा सत्ता पक्षका नेताले यो काम गरिदीनु पर्यो भने । कालान्तरमा फसिने काम भएकोले मैले गरिन ।त्यसको १ महीना पछी मलाई दुर्गममा सरुवा गरियो। त्यो पनि हुलाक कार्यालयमा । श्रीमतीलाई काठमाण्डौ छोडेर म कार्यक्षेत्र गएं । केही महीना पछि वढुवाको लिस्ट आयो मलाई थाहा थियो म अधिकृत पक्का हुन्छु । तर म भईन ।म भन्दा जुनीयर र पैसामा घुस चाकडी चापलूसी गर्नेहरु अधिकृत भय । एक पटक मैले कार्यक्षेत्रमा राजनैतिक हावी देखाऊने मित्रलाई गाली गरेको। तिनै मित्र राजनैतिक पहुचको आधार अधिकृत भयछन् ।अव ऊनी यही म कार्यरत अफीसको अधिकृत हुने भए ।उता गाउंमा एस एल सि फ़ेल भयका मेरा साथीहरु प्रसाद भन्ने एक जना दलालको माध्यमवाट अमेराका पुगे। त्यतिवेला २७/२७ लाख तिरेर अमेरीका पुगेका ति साथीहरुले नेपालमा नामी नामी स्कुलमा आफ्नो वच्चा पढायका छन् । घर गाडी सवै छ । म इमान्दार पुर्वक नेपालमा केही गर्दछु भन्दा जता सुकैवाट वन्धनमा पर्न थाले । एक दिन श्रीमतीलाई सवै कुरा भने ।मेरो श्रीमती एकदम वुझकी छिन् ।उनले गहभरि आँशु झार्दै मलाई विदेश जाने सल्लाह दिईन ।
एक जना मैले निस्वार्थ सहयोग गरेका कुवर थरका मित्र थिए ऊनलाई मैले सवै कुरा भने उनले पनि मलाई सहयोग गरे। फ्रान्सको एउटा कार्यक्रममा भाग लिनको लागी कागज पत्र तयार पारीदीय । म त्यहाँ आँए । सत्यकुरा भन्दा मेरो खर्च जहाज टिकट र नेपालमा कागज पत्र मिलाउंदा सवै गरेर २ लाख भन्दा वढी खर्च भएन । म यहा आयको ४५ दिन भो ।पोर्चुगलमा नेपालवाट हरेक तह तप्काको मान्छेहरु र उमेरले १९ देखी ४९ सम्मका पनि कार्ड वनाउन नै आएका रहेछन् ।
गाउंवाट काठमाण्डौ आउंदा त कति गार्हो हुन्छ। यो त विदेश हो। म आयको ४५ दिन भो । यसरी उनले आफ्नो मनको वह पोखे ।
मैले ऊनको कुरालाई पत्याए । किन कि नेपालमा त्यही अवस्था छ । प्रेम संजेल जस्ता उपसचिवको काहानी हामी सुनेको हौँ ।
कयौ सोझा र इमान्दार कर्मचारीहरु भ्रस्टाचारमा मुछीयर आत्म हत्या गर्न बाध्य भएको सुनिएकै हो । तै पनि मैले अन्तीम पटक सुव्वासापलाई भने विदेश आउंदीन भन्नु भएको थियो समय र परिस्थितिले गर्दा आउनु भएछ ।
सुव्वासापले गितको भाकामा भने
।।।।।।खान्न भन्दथ्यौ करेली अचार ।।।।।१
।।।।।जान्न भन्दथ्यौ के लाग्ने रैचर ।।।।२
गित सगै फेरी उनले भने हेर्नुहोस् हामी समय र परिस्थितिको दास हौ ।समयले मान्छेलाइ कहाँ कहाँ पुर्याऊदछ, थाहा हुदैन । युरोप आउनु सहयोग गरौंला भन्नु भएको थियो । गफै मात्र हो कि ?? लौ सहयोग गर्नु पर्यो ! हास्दै उने मलाइ भने ।
मैले पनि एक जना खतिवडा थरका मित्रलाई र न्यौपाने थरका अर्का मित्रलाई सवै कुरा बताएं ।
खतिवडाले कोठाको व्यावस्था गरिदीए अनि न्यौपैनेले एउटा कामको । सुव्वासापले अहीले ओरन्ते भन्ने ठाउंको चाईनीज रेस्टुरेन्टमा वर्तन माझ्ने काम गर्नु हुन्छ । आज सुव्वासाप संग भेट भो । म नेपालमा इमान्दाराताले काम गरेको फल यहाँ पाय । मैले सोधे कसरि ? ऊनले भने नेपालमा कुवंर जी र यहाँ न्यौपैने र खतिवडा जी । तपाईले सहयोग गर्नु भो । मलाई ६५० युरो तलव दिन्छ ।साउजीको तर्फबाट महीनाको ५५/६० युरो टिप्स पाईदो रहेछ । शारीरक काम गार्हो भएपनि मानशिक टचर भने छैन ।भाडै माझे पनि म ४० हजार त नेपाल पठाउंदछु । कुरामा कुरा थप्दै उनले कृपया मलाई सुव्वासाप भनेर नवोलाऊनु होस् भने । मेरो अनुरोध छ । हामीले पनि सहमत जनायौ ।
केही दिन अगाडी युरोपमा छचल्कीयका लेक्चरका आँसु अनि ४० कटेसी रमाउंला शिषर्क भएका लेख सेतोपाटीमा पढ्नु भएको रहेछ । हाँस्दै भन्नु भो फेरी सुव्वसापको छचल्कीयका आँसु नलेख्नु है । उंहाले त्यसो भन्दै गर्दा मैले सोधे "सुव्वासापलाई पोर्चुगलमा भेट्दा" भन्ने लेख लेख्न र मैले अनुमति पाएं ।
ऊनले प्रतिकृया जनाय नाम ठेगान र पद चै अलि नलेख्नु होला ।भन्दै आफ्नो झोलावाट एउटा पोको निकालेर दिय (मस्यौरा र सिन्की )म संग यो छ यो मेरो उपहार प्रेम पुर्वक खानुहोला ।म लागे आज बैंक एकाउन्ट खोल्नु छ भन्दै उनी लागे । म उनी गएको एकछिन् सम्म उनको बिषयलाइ लिएर टोलाइरहें ।
के अव इमान्दार कर्तव्य निस्ठ नागरीक,कर्मचारी,व्यापारी,जनतालाई नेपालमा ठाउं नभएकै हो त् ??
सुब्बासापलाई पोर्चुगलमा भेट गर्दा यस्तै प्रश्न उव्जीरहे ।
!! क्रमश !!
More in this category: « तीज पर्व ! हाम्रो वैभवशाली संस्कृति एवं परम्परा बिकृति र बिसंगति तर्फ धकेलिन्दै	!! पर्यटन मन्त्रीलाई पत्र !! »